Wararka Maanta: Jimco, July 30, 2021-Qarax culus oo Kismaayo lagula eegtay Bas ay la socdeen koox kubbada cagta ah
Wararka Maanta- Jimco, July 30, 2021
Qarax culus oo Kismaayo lagula eegtay Bas ay la socdeen koox kubbada cagta ah
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Qarax miinada dhulka lagu aaso ayaa goor dhow magaalada Kismaayo lagula eegtay gaari Bus ah oo ay la socdeen cayaartoyda kooxda kubada cagta ee ka tirsanayd rugta ganacsiga Jubbaland ee JCCI.
Gaariga uu qaraxa haleelay ayaa gabi ahaanba gubtay, sida ay muujinayaan sawirro lagasoo qaaday, Waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray cayaartoyda.
Balse weli illaa iyo hadda lama xaqiijin karo khasaaraha inta uu le'eg yahay, waxaana socdo gurmad loo sameynayo cayaartoyda weerarka lala beegsaday oo isku diyaarinayay in ay ka qeyb qaataan horyaalka Jubbaland oo galabta furmi lahaa.
Faahfaahin dhameystiran goordhow kala soco HOL.
Somaliland: Xildhibaan mucaaradku sheegeen in la afduubay oo hadlay
7/30/2021 4:25 PM EST
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Xildhibaan Ibraahin Maxammed Jaamac (Khadar Guun) oo xildhibaan kamida xildhibaannada isbahaysiga mucaaradku sheegay in xukuumada Somaliland afduubtay, ayaa sheegay in anay jirin cid afduubtay.
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay qaraxii galabta lala beegsaday dhalinyaradii Ciyaartoyda ahaa
7/30/2021 1:58 PM EST
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Axmed Madoobe ayaa ka tacsiyadeeyay khasaaraha ka dhashay qaraxii galabta lala beegsaday gaari Bas ah oo ay saarnayeen dhalinyaro Ciyaartooy ahaa.
Madaxweyne Farmaajo oo xasuuq ku tilmaamay qaraxii Kismaayo ee ay ku geeriyoodeen dhallinyaro cayaartoy ah
7/30/2021 11:19 AM EST
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey geerida dhallinyaro ciyaartooy ah oo ku geeeiyooday Qarax ka dhacay Kismaayo oo lala eegtay gaari bas oo ay la socdeen.
Wasiir Boos Mirre "Waxa uu ka qaylinayaa Faysal waxa weeyaan ururadii ayaa la furayaa"
7/30/2021 8:52 AM EST
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Wasiirka ciyaaraha Somaliland Boos Mirre Maxammed, oo ka jawaabay eedaymo uu guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe usoo jeediyay madaxweynaha Somaliland, ayaa sheegay in sababta hadalkiisa keentay wakhtigan ay tahay in la furayo ururadii siyaasada oo uu madaxweynuhu saxeexay sidu uu sheegay.
Xildhibaan ka tirsan xisbiga Waddani oo ku biiray isbahaysiga Kulmiye iyo garabka UCID
7/30/2021 7:03 AM EST
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Xildhibaan Axmed Maxamuud Fanax oo xisbiga Waddani uga soo baxay gobolka Togdheer, isla markaana ka mid aha xildhibaannada isbahaysiga Mucaaradka ayaa ku biiray isbahaysiga xisbiga Kulmiye iyo garabka UCID.
Boqor Buurmadow "Muuse Biixi carkee baanu leenahay, car xildhibaan Mustafe xidh"
7/30/2021 5:21 AM EST
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Boqor Cismaan Aw Maxamuud (Buurmadow), ayaa sheegay in madaxweynaha Somaliland uu qorshaynayo, in uu xidho xildhibaan Mustafe Axmed Cabdillaahi, oo sheegay in uu ka bad baaday qorshe afduub ah, oo xukuumada Somaliland ugu maleegtay dalka Itoobiya, Buurmadow ayaa madaxweynaha uga digay in uu xidho xildhibaanka.
Guddiga doorashada Koofur Galbeed oo Codsi u diray madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed
7/30/2021 5:17 AM EST
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Guddiga doorashooyinka maamulka Koofur Galbeed ayaa codsi u gudbiyay madaxweynaha maamul goboleedka Koofur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen.
Wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo ka dhacay gobolka Hiiraan
7/30/2021 3:06 AM EST
Jimco, Luulyo, 30, 2021 (HOL) - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo aad u qaraar oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Kuwa Al-shabaab ku dhexmaray deegaano hoos yimaada degmada Buula burte ee gobolka Hiiraan.
Man charged over violent attack on Somali man in Gozo as crowd cheered -Times of Malta
7/30/2021 2:27 AM EST
A man, who allegedly punched and threw a Somali national into the sea to the cheers of a crowd of onlookers at Mgarr harbour days ago, was denied bail upon his arraignment on Thursday.
Denmark to deport Somali back to 'safe' town where Al Shabab murdered her father -The National News
7/30/2021 2:09 AM EST
Senior al-Shabab fighter surrenders to Somalia troops -Xinhua
7/30/2021 1:50 AM EST
Somali PM attends Global Education Summit, meets UK Prime Minister Johnson -UK government
7/30/2021 1:39 AM EST
Somali Prime Minister Mohamed Hussein Roble today (29, July) met the UK Prime Minister Boris Johnson in the margins of the Global Education Summit held in London.